Ukwenza ikhephu-uFujian Snowman Co., Ltd.
Ukuskiya, njengemisetyenzana yolonwabo, kuya kusiba ngakumbi nangakumbi.
Ikhephu kwiindawo zokutyibilika ekhephini zinokuvela kwikhephu lendalo okanye kwikhephu lokuzenzela. Ekuqaleni kwexesha lokuskiya, iiholide zokutyibilika kwiskie zixhomekeke phantse ngokupheleleyo kwikhephu elilelona lilula ukugcina ikhephu lingatshintshi ixesha elide kwaye lifanelekile kunekhephu lendalo ukumelana nobushushu kunye nobushushu obuvela kwimithombo elula.
Okwangoku umatshini weqhwa weqhwa yeyona ndlela ithandwayo ngokwenza ikhephu. Flake umatshini ice kuqala uvelisa ngumkhenkce iflake; emva koko umgubo womkhenkce kwiqhekeza lomkhenkce; ekugqibeleni uvuthele umgubo. Xa kuthelekiswa nokwenziwa kwekhephu ngokwesiko, umatshini weqhwa we-flake uxhomekeke kancinci kubushushu bemo, ukubonelela ngokusebenza okuphezulu.
I-SNOWKEY ngokufudumeleyo inceda umthengi ngokubanika iseti epheleleyo yezisombululo zokwenza ikhephu, kubandakanya umenzi weqhwa elenza iflake, inkqubo yokugcina iqhwa ngokuzenzekelayo, izixhobo zokuhambisa umkhenkce, kunye neenkonzo ezixhasayo ezinje ngesixhobo sokuguqula iqhwa lekhephu kunye nezixhobo zokupholisa i-AIR. Ukongeza, inkampani inamava amaninzi kunye namaxesha amade kuyilo, ukuvelisa kunye nokwakha iiprojekthi. Ngolwazi oluthe kratya, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.